Semalt: I-Software Free Best Scraping Software
blogs. Kwakhona zibizwa ngokuba yiinkqubo zokuvuna iwebhu okanye amathuluzi okutshulwa kwedatha yewebhu. Ukuba uzama ukuqokelela idatha malunga nesiza sakho, ungasebenzisa iinkqubo ezilandelayo ze-extraction web uze ulandele idatha entsha okanye ekhona ngaphandle kwe-hitch.
I-Hub yolwazi yinkqubo ye-intanethi ye-intanethi, esetyenziselwa ukuqokelela idatha ukusuka kumakhulu ukuya kumawaka amasayithi. Le nkqubo inceda ukukhupha nokukhawulela amakhasi ewebhu ngemizuzwana. Ungasebenzisa okanye uthumele loo maphepha kwiifom ezahlukeneyo njengeJSON, iSQL kunye ne-XML. Kuyaziwa ngokuba ngumsebenzisi-friendly interface, kwaye icebo layo leprayimari libiza malunga ne-$ 50 ngenyanga kunye nokufikelela kuma-webk aphezulu angama-100k.
Enye enye evelele ithuluzi lokukhutshwa kwewebhu . I-Fminer.com isinika ufikelelo olulula kwixesha langempela, elihlelwe kwaye lihlelwe kakuhle. Ikhupha le datha kwi-intanethi kwaye isekela iilwimi ezingama-200, ukugcina idatha yakho kwiifom ezahlukeneyo ezifana ne-RSS, JSON, ne-XML. Makhe sixelele apha ukuthi iWebhose.io isistim esisekelwe kwisiphequluli esisebenzisa ulwazi olukhethekileyo ngelixa likhawulela okanye likhupha amaphepha akho ewebhu..
Ngenye yeenkqubo eziphambili ze-extraction web ukuya kutsho. I-PHP Scraper iifomathi zeefayethi ngokuthumela ulwazi kumaphepha athile ewebhu kunye nokuthumela idatha kwi-CSVs. Kulula ukukrazula kumakhulu ukuya kumawaka ewebhusayithi kunye neeblogs ngemizuzu usebenzisa le program. I-PHP Scraper elula isebenzisa ubuchwepheshe be-cutting edge ukuze ulandele iinkcukacha ezininzi imihla ngemihla, efunekayo ngamashishini amaninzi kunye neempawu ezinkulu. Le nkqubo iza kwiinguqulelo zamahhala kwaye zihlawulwe kwaye ziyakwazi ukufakwa kwi-Mac, i-Linux ne-Windows lula.
I-ScraperWiki inikeza inkxaso kwiqela elikhulu labasebenzisi kwaye iqokelela idatha kuyo nayiphi na indawo yesayithi okanye iblogi. Akufuneki nayiphi na ifowuni; kuthetha ukuba kufuneka uhlawule i-premium version yayo kwaye inkqubo iya kuthunyelwa kuwe nge-imeyili. Unako ukusindisa ngokukhawuleza idatha yakho eqokelelwe kwisitoreji sokugcina ifu okanye iseva yakho. Le nkqubo isekela zombini iGoogle Drive kunye ne-Box.net kwaye ithunyelwa njengeJSON ne-CSV.
I-Scraper iyaziwa kakhulu ngeenguqu zayo zamahhala kunye ne-premium. Le nkqubo yokukrazula i-web isekelwe kwifu kwaye isinceda ukukhupha ukusuka kumakhulu ukuya kumawaka emakhasi ewebhu nsuku zonke. Ezinye zezona zikhetho zikhethileyo zi-Crawlera, i-Bot Counter Measure, kunye ne-Crawl Builder. I-Scraper inokuguqula i-website yakho yonke into eququzelelweyo kwaye ilondoloze ukusetyenziswa ngokungaxhunyiwe kwi-intanethi ngokuzenzekelayo. Isicwangciso seprayimenti siya kukuhlawula i-$ 30 ngenyanga.